करको सदुपयोग खोइ ? – Chitwan Post
करको सदुपयोग खोइ ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुन २२, २०७६
जनताले कर तिरेअनुरुप सेवा, सुविधा र सहुलियत नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा पूर्वाधार विकास कर बढाएर बेइमानी गरेका छन् । सरकारले केही वर्षअघिदेखि बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ विकास कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । कुल १२ सय मेघावाट क्षमताको बूढीगण्डकी परियोजना सुरूमा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप (सिजिजिसी)लाई दिने विवादास्पद निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि स्वदेशी लगानीमै नेपालले निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त मह¤वाकांक्षी जलाशययुक्त परियोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रूपैयाँ विकास कर उठाउनु कसैको आपत्ति थिएन, रहेन । यसरी उठाइएको करमात्रै करिब ४५ अर्ब पुगेको छ । तर, सरकारले बूढीगण्डकी परियोजना न आफैँले बनाउने आँट ग¥यो, न बनाउन नसक्नुको कारण नै स्पष्ट ग¥यो । यस्तो अवस्थामा फेरि पूर्वाधार विकासको नाममा ५ रूपैयाँ थप गरी १० रूपैयाँ कर उठाउनुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिदेखि सडक र संसद्मा समेत यसको विरोध भइरहेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्षको सात महिनायता २१ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च गरेको छ । वर्षा लागेपछि असारे विकासका नाममा आधा बजेट खर्च गर्ने गरेको सरकारले पूर्वाधार विकासका लागिभन्दा पनि राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने लालसाले मात्र कर थपेको अर्थविद्हरुले औँल्याइरहेका छन् । जुन प्रयोजनका लागि जनतासँग कर उठाइएको थियो त्यो पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हुन आउँछ । तर, बूढीगण्डकी परियोजनाको नाममा उठाइएको कर अन्यत्रै खर्च गरेको सरकारले पटकपटक पूर्वाधार विकासमा योगदान पुग्नेगरी कर बढाइएको दाबी गर्नुलाई अर्थविद्हरुले आश्चर्य मानेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १३० अर्ब उठाउनुपर्ने राजस्व नउठेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । एनसेलदेखि ठूला करदाताहरुबाट उठ्नुपर्ने अर्बौं कर उठाउन निरीह बनेको सरकारले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पर्ने इन्धनको मूल्य बढ्ने गरी कर निर्धारण गर्नु सर्वथा अनुचित हो । यसै पनि जनताबाट उठाइएको ठूलो धनराशिको सदुपयोग हुन सकेको छैन । बूढीगण्डकीको नाममा उठाइएको करको सदुपयोग नहुनु र विनियोजित बजेटको रकम खर्च हुन नसकेको स्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर उठाउनुको औचित्य देखिँदैन ।
कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । राज्यलाई कर नतिर्नु बेइमानी पनि हो । तर, कर तिरेर पनि राज्यबाट आवश्यकीय सेवा, सुविधा र सहुलियत नपाउनुचाहिँ अन्याय हो । जनताले तिरेको करमा भ्रष्टाचार हुने, नेता/कार्यकर्ता र कर्मचारी मोटाउने, राज्यकोषको दुरूपयोग हुने कारण करको प्रयोजनबारे प्रश्न उठेको हो । सर्वविदितै छ, सरकारअन्तर्गतका तीन दर्जन बढी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु वर्षौंदेखि बन्द हालतमा रहेका छन् । ती प्रतिष्ठानमा रहेका अर्बौं मूल्यबराबरका मेसिन तथा कलकारखाना खिया लागेका छन् । हजारौँ जनतालाई रोजगारी दिलाउने, उत्पादन बढाएर राज्यलाई केही हदसम्म आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने उद्योग, प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । एकातिर बन्द उद्योग नखुलाउने र अर्कातिर सरकारी सम्पत्तिको व्यापक दुरूपयोग भइरहने श्रृङ्खलाका बीच फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा विकासको नाममा कर उठाउनु कुनै मानेमा उचित मान्न सकिँदैन । विकासका काममा बढवा दिनभन्दा घुमाइफिराइ जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधा वृद्धि गर्नका लागि अनुचित कर बढाइएकोमा आमजनता निराश बनेका छन् । सरकारले यो कदम फिर्ता लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
निवृत्तको मापदण्ड, योग्यता र समृद्धि
मानव र कोरोना भाइरसबीचको भीषण लडाइँ